Tsofoka - Wikipedia
Ny tsofoka dia hasin-teny isan' ny sokajin' ny tsirinteny izay fanisika ao anatin' ny fototeny na ny hasin-teny hafa ka mizara izany ho roa. Ahitana fampiasana tsofoka ny fiteny aostrôneziana (toy ny fiteny malagasy, indôneziana, maley, tagalôga, sondaney, javaney), ny fiteny semitika (toy ny fiteny arabo), ny fiteny indô-eorôpeana sasany (toy ny fiteny sanskrita, grika taloha, latina)n, ny fiteny aostrôaziatika (toy ny fiteny kmera)
1 Tsofoka ao amin' ireo fiteny aostrôneziana
1.1 Tsofoka ao amin' ny fiteny malagasy
1.2 Tsofoka ao amin' ny fiteny indôneziana sy maley
1.3 Tsofoka ao amin' ny fiteny sondaney
1.4 Tsofoka ao amin' ny fiteny tagalôga
1.5 Tsofoka ao amin' ny fiteny javaney
2 Tsofoka ao amin' ny fiteny aostrôaziatika
2.1 Tsofoka ao amin' ny fiteny kmera
3 Tsofoka ao amin' ireo fiteny indô-eorôpeana
3.1 Tsofoka ao amin' ny fiteny sanskrita
3.2 Tsofoka ao amin' ny fiteny latina
3.3 Tsofoka ao amin' ny fiteny grika taloha
3.4 Tsofoka ao amin' ny endriky ny fiteny espaniôla sasany
4 Tsofoka ao amin' ny fiteny semitika
4.1 Tsofoka ao amin' ny fiteny arabo
5 Tsofoka ao amin' ny fiteny manirery sasany
5.1 Tsofoka ao amin' ny fiteny sery
Tsofoka ao amin' ireo fiteny aostrônezianaHanova
Ampiasaina matetika ny tsofoka ao amin' ireo fiteny aostrôneziana.
Tsofoka ao amin' ny fiteny malagasyHanova
Amin' ny teny malagasy dia ahitana tsofoka, ka isan' izany ny hoe: -in-, -if-, -amp-, -om-. Misy ny milaza fotoana (ohatra: -in- ao amin' ny hoe vinidy < v-in-idy, izay milaza fotoana lasa sy fitodika atao, fahita matetika kokoa amin' ny fitenim-paritra malagasy), ny milaza fitodika (ohatra: -if- ao amin' ny hoe mifanahaka < m-if-an-tahaka milaza fitodika mpifanao; -amp- ao amin' ny hoe mampanjaitra < m-amp-an-zaitra milaza fitodika mpampanao). Ao koa ny tsofoka enti-milaza maro (ohatra: -re- ao amin' ny hoe ireto, avy amin' ny hoe ito; ireny avy amin' ny hoe iny) sy ny tsofoka isan-karazany fahita amin' ny mpamari-toetra sy ny fototeny (ohatra ny hoe -il- ao amin' ny hoe bilitika, avy amin' ny hoe bitika, -or- ao amin' ny hoe tsorapaka, avy amin' ny hoe tsopaka; ngorodona avy amin' ny hoe ngodona).
Tsofoka ao amin' ny fiteny indôneziana sy maleyHanova
Ahitana tsofoka koa ny ao amin' ny fiteny indôneziana, ka isan' izany ireto: -el-, -er-, -em-, -in-, -ha-. Efa tsy mamokatra intsony ny sasany amin' ireo tsofoka ireo ka tsy azo anasampanana hahazoana teny vaovao.
Ny teny hoe gembung (fanovan' ny hoe kembung) dia midika hoe "mibontsina", fa ny hoe gelembung dia midika hoe "tapoaka, bola poak' aty". Ny teny hoe cerlang dia midika hoe "mamiratra" fa ny hoe cemerlang kosa dia midika hoe "mamirapiratra". Ny teny hoe gigi dia midika hoe "nify", fa ny gerigi kosa midika hoe "nifinifiny".
Tsofoka ao amin' ny fiteny sondaneyHanova
Mampiasa tsofoka ihany koa ny fiteny sondaney. Ohatra amin' izany ireto: -ar-, -arar-, -um-, -in-.
Anisan' ireo tsofoka heverina ho mbola mamokatra ny hoe -ar- sy ny -arar- izay manambara ny endrika milaza maron' ny mpamari-toetra, na indraindray koa ny endrika milaza maron' ny anarana ny mpisolo tena izay manomboka amin' ny renifeo (raha manomboka amin' ny zanapeo dia miova ho tovona ar- ilay tsofoka). Ankoatr' ireo tsofoka ireo dia ao koa ny tsofoka -um- (famoronana matoanteny) sy ny tsofoka -in- (manambara fitodika atao), ka ireo tsofoka roa ireo dia nampiasaina betsaka tao amin' ny fiteny sondaney taloha, fa ny fiteny sondaney vaovao dia tsy mampiasa azy ireo matetika afa-tsy ao amin' ireo asasoratra kanto.
Tsofoka ao amin' ny fiteny tagalôgaHanova
Ao amin' ny fiteny tagalôga dia misy endrika sahala amin' ny fitodika mpanao izay azo avy amin' ny fanasiana tsofoka -um- aorian' ny fanombohan' ny matoanteny. Ny tsofoka fantatra indrindra dia ny -in- izay ahazoana matoanteny milaza finiavana, toy ny hita amin' ny hoe giniba izay midika hoe "rava" (avy amin' ny hoe giba, mpamari-toetra midika hoe "tonta"); binato midika hoe "toraham-bato" (avy amin' ny hoe bato "vato"); ary ginamit izay midika hoe "ampiasaina". Nindrana ny teny anglisy hoe graduate ny fiteny tagalôga, ka raha hiteny hoe "nahazo diplaoma aho" dia ny matoanteny hoe grumaduate no ampiasain' ny mpiteny.
Tsofoka ao amin' ny fiteny javaneyHanova
Ao amin' ny fiteny javaney dia ahitana ireto tsofoka ireto: -in-, -um-, -er- ary -el-. Ny tsofoka -in- dia milaza fitodika atao. Ohatra: karya → kinarya ("vita"), carita → cinarita ("tadiavina")
Tsofoka ao amin' ny fiteny aostrôaziatikaHanova
Tsofoka ao amin' ny fiteny kmeraHanova
Ny fiteny kmera, izay isan' ireo fiteny aostrôaziatika, dia ahitana tsofoka miisa fito. Anisan' izy ireo ny tsofoka manova ho anarana hoe -b-. Ohatra, ny teny hoe lbɨən izay midika hoe "hafainganam-pandeha", nisampana avy amin' ny hoe lɨən "haingana"; ny hoe lbɑɑng izay midika hoe "fitsapana", izay avy amin' ny hoe lɔɔng midika hoe "mitsapa, manenjika". Ao koa ny tsofoka -m- ny mpanao, izay nahazoana ny hoe cmam, midika hoe "mpiambina", izay avy amin' ny hoe cam izay midika hoe "mijery". Efa tsy mamokatra intsony ireo tsofoka ireo ka tsy hita raha tsy ao amin' ireo teny nolovaina tamin' ny fiteny kmera taloha.
Tsofoka ao amin' ireo fiteny indô-eorôpeanaHanova
Ao amin' ny fiteny prôtô-indô-eorôpeana, ny endrika milaza fotoana ankehitriny, ao amin' ny matoanteny sasantsasany, dia manisy tsofoka -n- na -m- ao amin' ny fototeny. Izany tranga izany dia nolovain' ny fiteny sasany toy ny fiteny sanskrita, ny fiteny grika taloha, ny fiteny latina.
Tsofoka ao amin' ny fiteny sanskritaHanova
Ny fiteny sanskrita dia mampiseho indrindra ity endri-javatra ity, ka ny telo amin' ireo sokaji-matoanteny folo no isehoan' izany. Ohatra, ny √yuj-, "mikambana" dia manome ny hoe yu·ná·k·ti "mikambana izy" ↔ yu·ñj·ánti, "mikambana izy ireo".
Tsofoka ao amin' ny fiteny latinaHanova
Ao amin' ny fiteny latina dia ahitana ny tsofoka -n- izay fahita amin' ny matoanteny toy ny hoe vincō ("mandresy aho") (ny endrika amin' ny fanehoan-javatra efa sy amin' ny fitodika atao anefa dia victus ("resy"), avy amin 'ny fototeny hoe vic, izay nahazoana koa ny hoe vincimus. ("mandresy isika", "mandresy izahay"). Hevero koa ny fototeny hoe liqu- ("mamela", "mandao"), izay nahazoana ny hoe relinquo (midika hoe "mamela aho") sy ny hoe relictus ("tavela", "avela", "ilaozana").
Tsofoka ao amin' ny fiteny grika talohaHanova
Ahitana tsofoka ny matoanteny lambánō (ahitana ny tsofoka -an- koa) midika hoe "mandray aho", ny ao amin' ny fiteny grika taloha. Ny aôrista anefa dia manana endrika hoe élǎbon "nandray aho".
Tsofoka ao amin' ny endriky ny fiteny espaniôla sasanyHanova
Amin' ny fiteny espaniôla tenenina ao Nikaragoa sy Kôsta Rika ary Hôndorasy dia ahitana ny tsofoka -it- izay milaza hakelezana ao amin' ny anarana. Ohatra: Óscar → Osquítar (fa tsy Oscarito); Edgar → Edguítar; Victor → Victítor.
Tsofoka ao amin' ny fiteny semitikaHanova
Tsofoka ao amin' ny fiteny araboHanova
Mampiasa ny tsofoka ت / -t- ny fiteny arabo ao amin' ny matoanteny voasokajy ao amin' ny endrika VIII, izay ampiasaina hanambaràna ny hevitra tampody mifandraika amin' ny matoanteny ao amin' ny endrika I. Apetraka ao aorian' ny renifeo voalohany ao amin' ny fototeny izany; apetraka eo alohany ny tovona -i- (izay tsy misy heviny manokana) satria tsy afaka manomboka amin' ny renifeo mifanarakara ny teny iray. Ohatra amin' izany ny hoe اجتهد / ijtahada (midika hoe "niasa mafy izy"), izay avy amin' ny hoe جهد / jahada (midika hoe "niezaka izy"). Nisampana avy amin' ireo teny ireo ny hoe اجتهاد / ijtihad (midika hoe "ezaka fandinihana") sy ny hoe جهاد / jihad (midika hoe "ezaka, tolona, ady").
Tsofoka ao amin' ny fiteny manirery sasanyHanova
Tsofoka ao amin' ny fiteny seryHanova
Ao amin' ny fiteny sery (karazana fiteny manirery), ny matoanteny sasany dia ahazoana fototeny milaza maro ny tsofoka -tóo- apetraka aorian' ny zanapeo voalohany ao amin' ny fototeny milaza tokana; ampitahao ny fototeny milaza tokana hoe ic (midika hoe "mamboly") sy ny fototeny milaza maro hoe itóoc. Ohatra: itíc ("namboleny va ilay izy?") sy ititóoc ("nafafiny va izy ireo?").
Tsofoka ao amin' ny teny malagasy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsofoka&oldid=1045592"
Dernière modification le 7 Jiona 2022, à 12:14
Voaova farany tamin'ny 7 Jiona 2022 amin'ny 12:14 ity pejy ity.